Al-Shabaab oo sheegatay qarax uu ka badbaaday Maareeyaha Dekedda Muqdisho – Banaadir Times
By banaadir 28th November 2020 120 No comment
Degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir waxaa maanta ka dhacay qarax uu ka badbaaday Maareeyaha Dekedda Muqdisho Axmed Washington xili uu u socday xafiiskiisa shaqada sida ay Mustaqbal u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Inta la xaqiijiyay qaraxa waxaa ku dhintay labo Askari oo ilaalo u ah Maareeye Axmed, kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray qaraxa lala eegtay Gaarigiisa oo mararay Degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa, waxa ay shaacisay in uu badbaaday Maareeyaha Dekedda Muqdisho oo ay sheegtay in uu ahaa bartilmaameedka qaraxaan, inkasta oo uu ka badbaaday, balse labo kamid ah ilaaladiisa ayaa ku dhimatay.
Waa qaraxii labaad oo muddo 24-saac ah ka dhacay Magaalada Muqdisho isla markaana sababay dhimasho & dhaawac, weerarkii kan ka horeeyay waxaa fuliyay qof isku soo xiray Jaakadda qaraxda lagu xiray, isaga oo galay Maqaaxi ku taalla wadada isku xirta KM4 & Garoonka diayaradaha Aadan Cadde.
Labada qarax waxaa sheegatay Al-Shabaab, shaqsiyaadka ku dhintay ayay ku sheegtay in ay katirsan yihiin Dowladda Soomaaliya, Maareeyaha Dekedda Muqdisho ku sifeysay nin u dhaw Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
By banaadir 17th April 2021